Momba anay - Eurborn Co., Ltd.
Fahazavana ambanin'ny rano
Momba ny Biraontsika
Momba ny Fitsapana
Wiring tsy tantera-drano
Iza moa isika:
Eurborn no hany mpanamboatra sinoa natokana ho an'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny famokarana jiro vy tsy misy pentina ivelany ambanin'ny tany sy ambanin'ny rano.Tsy sahala amin'ireo mpamatsy hafa izay manao karazana jiro maro, isika dia tokony hifantoka hatrany noho ny tontolo henjana izay mihantsy ny vokatra.Ny vokatray dia tsy maintsy mahazaka ireo fepetra ireo ary mahavita tsara na inona na inona fanamby.Noho izany dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra isika amin'ny dingana tsirairay mba hiantohana ny vokatray ho afa-po aminao.
Tsy maintsy hentitra isika amin’ny antsipiriany.Ny mpifaninana amintsika dia ireo marika malaza iraisam-pirenena.Noho izany dia tsy maintsy mampifanaraka ny kalitao avo indrindra amin'ny vokatray amin'ny fenitra misy azy ireo isika.Na izany aza, tsy mifanaraka amin'ny vidin'izy ireo izahay.Izany no fanoloran-tenanay ho an'ny mpanjifanay, vokatra avo lenta.
Nahoana no mifidy anay:
1: Ny ekipa R&D anay dia manana traikefa momba ny jiro ara-javakanto ivelany mihoatra ny 20 taona.Mamaly ny fepetra takian'ny mpanjifa, dia mamita haingana sy mahomby ny ODM, famolavolana OEM, ary manome fanohanana ara-teknika matihanina mifanaraka amin'ny zavatra andrasana.
2: Manana ny lasitra ao an-trano izahay.Tsy toy ny mpamatsy hafa izay outsourcing na antoko fahatelo.
3: Tsy misy MOQ ho an'ny ankamaroan'ny vokatra vy rehetra.
4: Manolotra vidiny mivantana avy amin'ny orinasa izahay.
5: Manaraka tanteraka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fanaraha-maso kalitao sy ny fanaraha-maso ny andraikitra ara-tsosialy.
6: Manao fitiliana sy fitsirihana 100% izahay ho an'ny fahanterana, IP (tsy tantera-drano, vovoka) ary fitaovana.
7: Manana taratasy fanamarinana patanty vokatra izahay.
8. Izahay dia CE, ROHS, ISO9001 voamarina.
2020 no taona sarotra indrindra.Mba hamerenana ny fiaraha-monina sy ny mpanjifantsika, Eurborn dia miezaka mafy manampy ny rehetra.Nanolotra toaka sy saron-tava ara-pitsaboana marobe izahay.Na inona na inona zava-tsarotra, hifidy ny hiara-hiady aminao izahay.
Biraon'ny varotra: Room 702, Zhe Jiang Commercial Building, No. 430 Dongguan Avenue, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, Sina
Jiro antany Jiro antanety Jiro LED intany Jiro antany Jiro ambanin'ny tany InGround Luminaires Ny vokatra rehetra